Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) - Hello Sayarwon
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ကဘာလဲ။
အချို့သောအခြေအနေများတွင် စိုးရိမ်တတ်ကြသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ – ရည်းစားနဲ့ချိန်းတွေ့ခြင်း(သို့)လူအများရှေ့တွင်တင်ပြရှင်းလင်းမှုများလုပ်ခြင်း တို့သည်
အစာအိမ်ထဲတွင် လိပ်ပြာများရောက်နေသကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားစိုးရိမ်သည့် ခံစားမှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆိုရှယ်ဖိုးဘီးယားဟုခေါ်သော စိုးရိမ်လွန်ခြင်း ရောဂါတွင် နေ့စဉ် လူအများနှင့်ဆက်ဆံရသည်ကို ကြောက်ခြင်း၊စိုးရိမ်ခြင်း၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိနေခြင်း နှင့် ရှက်ခြင်း တို့ဖြစ်နေတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားသူများက မိမိကို ဝိုင်းအပြစ်ပြောကြမည်ကို ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေ၍ဖြစ်သည်။
စိုးရိမ်လွန်ခြင်းသည် နာတာရှည်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် စိတ်ရောဂါတခုဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ဆေးများဖြင့်ကုသခြင်း၊နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို မည်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို လေ့လာသင်ကြားခြင်းတို့ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့် အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံမှုတို့အား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လက်ရှိ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများတွင် တတိယကမ္ဘာ့အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏စောင့်ကြည့်မှတ်သားထားသော အချက်အလက်စာရင်းများအရ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လူဦးရေ၏ 7ရာခိုင်နှုန်းသည် စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါကို ခံစားနေကြရသည်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှိ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ထိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ချေသည် 13ရာခိုင်နှုန်းထက်အနည်းငယ်မျှပင် မြင့်တက်နေသည်ဟုဆိုသည်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အထူးသဖြင့် ကလေးများတွင် ရှက်တတ်ခြင်း (သို့) အချို့သော ကိစ္စများတွင် စိတ်သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ခြင်း တို့သည် စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လက္ခဏာများမဟုတ်ပေ။ လူအများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မိမိ၏သက်သောင့်သက်သာရှိနေမှုရှိမရှိမှာ မိမိ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊အလေ့အကျင့်များနှင့် ဘဝတစ်လျှောက်ခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရမှုများအပေါ်မူတည်ပြီး လွန်စွာကွဲပြားသည်။ အချို့သော ဝေဒနာရှင်များသည် မိမိခံစားရသည်ကို သိပ်မဖော်ပြကြပဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင်ပင်တက်ကြွနေတတ်သည်
နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရသော သာမန် စိုးရိမ်မှုများနှင့်ယှဉ်ပါက စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါတွင်
ကြောက်ခြင်း၊စိုးရိမ်လွန်ခြင်း၊အလုပ်၊ကျောင်း (သို့)အခြားသောနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ရှောင်ဖယ်နေခြင်းတို့ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
လူအများက ဝိုင်း၍ဝေဖန်ခံရမည့် အခြေအနေများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း
မိမိကိုယ်ကိုအရှက်ရစေခြင်း (သို့) စော်ကားမိခြင်းတို့ဖြစ်သွားမည်ကို တွေးပူနေမိခြင်း
မိမိမှ အခြားသူအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်ကိုပူပန်ခြင်း
သူစိမ်းများနှင့် စကားပြောရခြင်း (သို့) ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ကို ကြောက်ခြင်း
မိမိ၏စိုးရိမ်သည့်ပုံစံကို အခြားသူများမှ သတိထားမိမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံနေခြင်း
ရှက်သွေးဖြာခြင်း၊ချွေးပြန်ခြင်း၊တုန်နေခြင်း (သို့)အသံများကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း စသော ကိုယ်နေအမူအယာများ ဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ခြင်း
အရှက်ရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့၍ လူများကို စကားပြောခြင်း(သို့) အခြားသောအရာများလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
မိမိအား အာရုံအစိုက်ခံရနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ရှောင်ခြင်း
မိမိမှ ကြောက်လန့်နေသော အရာတခုခုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတခုပြုလုပ်ပြီးတိုင်း မိမိ၏လုပ်ဆောင်မှုအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်နေခြင်း နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင် မိမိဘက်မှ လိုအပ်ချက်နှင့်အပြစ်များရှိမရှိကို ရှာဖွေနေတတ်ခြင်း
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အဆင်မပြေမှုတခုမှ အဆိုးဆုံးသောဖြစ်လာနိုင်သည့် ရလဒ်များကိုသာ တွေးနေမိခြင်း
ကလေးများတွင်ကား လူကြီးများဖြင့် ဆက်ဆံရပါက
ငိုခြင်း၊ဒေါသထွက်ခြင်း၊မိဘများအားတွယ်ကပ်နေခြင်း(သို့) အခြားသော လူမှုဆက်ဆံရေးများတွင် စကားပြောရန်ရှောင်ဖယ်နေခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။
သရုပ်ပြခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည့် စိုးရိမ်လွန်ရောဂါတွင်ကား လူရှေ့သူရှေ့တွင် စကားပြောရခြင်း၊သရုပ်ပြရခြင်းတို့ပြုလုပ်သောအခါမှ လွန်စွာ ကြောက်လန့်ခြင်း၊စိုးရိမ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားပြီး အခြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများတွင် ထိုကဲ့သို့ စိုးရိမ်ခြင်း၊ကြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်ပွားလေ့မရှိပါ။
မိမိ၏ကိုယ်တွင်လည်း စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါကြောင့် လက္ခဏာများပြတတ်သည်။ ထိုလက္ခဏာများမှာ
စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါရှိပါက သာမာန်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော အရာများကိုပင် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ကာ သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်လာတတ်သည်။ဥပမာ အများသုံးနားနေခန်းကိုသုံးခြင်း၊သူစိမ်းများဖြင့်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊အခြားသူများရှေ့တွင် အစာစားခြင်း၊တဖက်လူနှင့် အကြည့်ချင်းဆုံခြင်း၊စကားစပြောခြင်း၊ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ပါတီပွဲများနှင့် အခြားသော လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်သည့်ပွဲများကို တက်ရောက်ခြင်း၊ကျောင်း(သို့)အလုပ်သွားခြင်း၊ထိုင်ရန်ခုံမလွတ်တော့သော အခန်းထဲသို့ဝင်ခြင်း၊စတိုးဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို ကိုင်မိပြီးမှ သူ့နေရာသူပြန်ထားခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်လွန်ရောဂါသည် အချိန်ကြာလာသောအခါ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ သင်သည် စိတ်ဖိစီးမှု (သို့)တောင်းဆိုမှုအများအပြားကို ခံနေရပါက ပိုဆိုးလာနိုင်သည်။ စိုးရိမ်မှုကို အားပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ခဏတာကာလတို တခုအတွက် သင့်အား သက်သာစေနိုင်သော်လည်း သင်၏စိုးရိမ်မှုများအတွက် ကုသမှုမခံယူပါက နာတာရှည်ဖြစ်လာတတ်သည်။
ပုံမှန်နေ့စဉ်အခြေအနေများကို ထိတ်လန့်ခြင်း၊ရှက်ခြင်း၊(သို့)စိုးရိမ် ပူပန်နေခြင်းတို့ဖြစ်နေ၍ ထိုအခြေအနေများကို ကြောက်ကာရှောင်ဖယ်နေပါက ဆရာဝန်(သို့) စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများက ဆိုးဝါးသော စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်လာပါက စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါ(သို့) အခြားသော ကုသရန်လိုအပ်သည့်စိတ်ရောဂါတခုခုရှိနေတတ်သည်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အခြားသောစိတ်ရောဂါများကဲ့သို့စိုးရိမ်လွန်ခြင်းသည် များပြားရှုပ်ထွေးလှသော ပတ်ဝန်းကျင်၏မိမိအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် မျိုးရိုးဗီဇများအပေါ်အခြေခံကာဖြစ်ပေါ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းများမှာ –
မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း – စိုးရိမ်လွန်ခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သော်လည်း မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် မည်မျှဖြစ်တတ်ပြီး ပြင်ပမှလေ့လာသက်ရောက်မှုများကြောင့် မည်မျှဖြစ်တတ်ကြောင်းကို ယခုအထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။
ဦးနှောက်၏တည်ဆောက်ပုံ – ဦးနှောက်ထဲရှိ အမိုင်ဒလာဟုခေါ်သော အရာတခုသည် ကြောက်ရွံ့စိတ်များကို ထိန်းချုပ်သည်။ ထိုအမိုင်ဒလာ လွန်စွာအလုပ်လုပ်နေသော ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်များသည် အလွန်ကြောက်တတ်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးများတွင်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် – စိုးရိမ်လွန်ခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လေ့လာသင်ယူအတုခိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သည်။ အ
ခြားသောသူများ၏စိုးရိမ်ပူပန်နေပုံများကို မြင်တွေ့ပြီးနောက်ဖြစ်လာတတ်သည်။ ပို၍ပြောရလျှင် အရမ်းစည်းကမ်းတင်းကြပ်၍ ချုပ်ချယ်တတ်သော မိဘများ၏ကလေးများနှင့် စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါသည် ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် –
မိသားစု ရာဇဝင် –
မိမိ၏မိဘနှစ်ပါးနှင့် မွေးချင်းမောင်နှမများတွင် ထိုရောဂါရှိနေပါကလည်း ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ချေများသည်။
ပါးစော်ကားခံရခြင်း ခံခဲ့ရသည့် ကလေးများတွင်လည်း ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် မိသားစုအရှုပ်အထွေးများ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစော်ကားခံရခြင်း စသော အတွေ့အကြုံဆိုးများသည်လည်း စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါကိုပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်စေသည်။
ဘဝတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေသစ်များကို ရှက်တတ်သော ကလေးများတွင်လည်း ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိနေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အသစ် (သို့) အလုပ်အသစ် –
သူစိမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရခြင်း၊လူမြင်ကွင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောခြင်း၊(သို့) အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များကို အလုပ်ခွင်တွင် တင်ပြခြင်းတို့သည်လည်း စိုးရိမ်လွန်သည့် လက္ခဏာများကိုပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော်ပေးလိုက်နိုင်သည်။ ထိုလက္ခဏာများသည် အများအားဖြင့် အရွယ်ရောက်စ အသက်အရွယ်များတွင် စတင်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
မျက်နှာ အကျည်းတန်၍ ပုံပျက်နေခြင်း၊အကြောလိုက်ကာတုန်ခြင်း၊ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိခြင်း
နှင့် အခြားသောရောဂါများသည် မိမိကိုယ်ကို အာရုံစိုက်သတိထားမိနေစေပြီး စိုးရိမ်လွန်ခြင်းရောဂါများကို အချို့သောသူများတွင်ဖြစ်ပွားစေတတ်သည်။
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်၏ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ထိတွေ့ကြည့်ရှူ စမ်းသပ်မှုနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားစမ်းသပ်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေရှာအတည်ပြုနိုင်သည်။ မိမိ၏စိုးရိမ်မှုနှင့်ပတ်သတ်သော မေးခွန်းများနှင့် မည်သည့်အရာများက သက်သာစေကြောင်း(သို့)ပိုဆိုးစေကြောင်းများကိုလည်း ဆရာဝန်များမှ မေးမြန်းတတ်သည်။ သွေးစစ်ခြင်း၊ဆီးစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပုံစံတူရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပွားစေတတ်သော ရောဂါများရှိမရှိသိရှိစေရန် စစ်ဆေးတတ်သည်။(ဥပမာ လည်ပင်းကြီးရောဂါ)
Social anxiety disorder (social phobia) (စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသုံးအများဆုံးသော ကုသမှုနှစ်ခုမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးကုသမှုနှင့် ဆေးများဖြင့်ကုသမှုတို့ဖြစ်သည်။ ထိုကုသမှုနှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ကာအသုံးပြုတတ်သည်။
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် လူအများစုမှာ သက်သာလာတတ်သည်။ ထိုကုသမှုတွင် သင်သည် မိမိ၏အဆိုးမြင်နေသော အတွေးများကို သိရှိပြောင်းလဲခြင်း၊နှင့် လူအများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းစသည်တို့ကို လေ့လာသင်ယူရသည်။ သိစိတ်ဖြင့် အပြုအမူများကိုကုသခြင်း ဟူသော ကုသနည်းမှာ စိုးရိမ်လွန်သောရောဂါများအတွက် အသုံးအများဆုံးသော နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ထိုကုသမှုတွင် သင်သည် သင့်၏အကြောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုကုသမှုဖြင့် မိမိ၏ စိုးရိမ်တတ်သောအရာများကို တွေ့ကြုံသောအခါ ပြန်လည်ဖြန်ဖြေကိုင်တွယ်မှုစွမ်းရည် နှင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုစွမ်းအားများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတို့တွင် သင်သည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်သည်။
စိုးရိမ်လွန်ရောဂါကိုကုသရန် များပြားလှသော ဆေးမျိုးစုံကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် SSRI တို့သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့် စိုးရိမ်လွန်ရောဂါ၏ လက္ခဏာများကို ကုသရန်သုံးသည်။paxil (သို့) zoloft တို့ကို ဆရာဝန်မှ အသုံးပြုတတ်သည်။
SNRI ၊ venlafaxine တို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချရန် ဆေးများ၏ပမာဏအနည်းငယ်သာစတင်ပေးတတ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးမြှင့်ပြီးမှ ဆေးပမာဏအပြည့်ကို ပေးတတ်သည်။ သင့်၏ရောဂါလက္ခဏာများသိသိသာသာ တိုးတက်ပျောက်ကင်းရန် အပတ်ပေါင်းများစွာမှ လပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်သည်။
သင်၏ဆရာဝန် (သို့) စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုမှ ပေးနိုင်သည့် အခြားသောဆေးများမှာ –
စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ – မိမိအား အသင့်တော်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးအား ရှာတွေ့ရန် စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုရတတ်သည်။
စိုးရိမ်မှုအားလျော့ပါးစေသော ဆေးများ –
ဗန်ဇို ဒိုင်ယာဇီပန် သည်သင်၏စိုးရိမ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထိုဆေးများသည် လျင်မြန်စွာသက်သာစေတတ်သော်လည်း ဆေးအား စွဲလမ်းစေတတ်သောကြောင့် အချိန်တိုကာလတစ်ခုအတွက်သာ အများအားဖြင့် အသုံးပြုရသည်။ သင်၏ဆရာဝန်မှ စိုးရိမ်မှုလျော့ပါးစေသည့် ဆေးများပေးလာပါက လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတခုထဲမရောက်ခင်
ထိုဆေးများသည် မိမိအပေါ်မည်ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသိရှိရန် အရင်သောက်သုံးကြည့်သင့်သည်။
ထိုဆေးများသည် အက်ပီနက်ဖရင်း၏ အာနိသင်ကို လျှော့ချပိတ်ပင်ကာ နှလုံးခုန်နှုန်း၊သွေးပေါင်ချိန်၊နှင့် အသံတုန်ခြင်း၊လက်တုန်ခြင်းတို့ကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေးများအား မကြာခဏမဟုတ်ပဲ တခါတရံ ဥပမာ မိန့်ခွန်းပြောခံနီးသာ အသုံးပြုပါက အကောင်းဆုံးထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထိုဆေးများကို စိုးရိမ်လွန်ခြင်းအား ပုံမှန်ကုသရန်သုံးခြင်းကိုကား ခွင့်မပြုထားပေ။ စိုးရိမ်မှုလျော့ပါးစေသည့် ဆေးများကဲ့သို့ပင် ထိုဆေးများကိုလည်း ကြိုသောက်သုံးကြည့်ခြင်းဖြင့် မိမိအားမည်ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။
ဆေးများအား ပုံမှန်စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သုံးပါ။
အာနိသင်မပြသေးခင် အချိန် ရောဂါလက္ခဏာမပျောက်သေးမီကာလအတွင်းတွင် ဆေးများအား မဖြတ်ပါနှင့်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုများကိုလည်း အပတ်ပေါင်း၊လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သည့်တိုင် ဆက်လက် ခံယူသင့်ပါသည်။ မိမိနှင့် သင့်တော်သောဆေးမှာ အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ပြီး တရားရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်အထိ ဖြစ်တတ်သည်။
အချို့သော သူများတွင် စိုးရိမ်လွန်ခြင်း၏လက္ခဏာများသည် အချိန်ကြာသည်နှင့် ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် ဆေးအားဖြတ်ပစ်လိုက်နိုင်သည်။ အချို့သောသူများသည် ရောဂါ ပြန်ဖြစ်မှုအားကာကွယ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဆေးအားစွဲသောက်ရသည်လည်းရှိသည်။
ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်စေရန် ရက်ချိန်းများနှင့် ဆေးများကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြသသောက်သုံးသင့်ပါသည်။
ထို့ပြင် မိမိရောဂါအခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကို ဆရာဝန်အား အသိပေးမေးမြန်းသင့်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက စိုးရိမ်လွန်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် စိုးရိမ်လွန်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အားကစားပုံမှန်လုပ်ပါ – အလွန်အကျွံမလုပ်မိစေရန် တဖြည်းဖြည်းချင်းအစပျိုးပါ။ လုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကို နည်းနည်းချင်းစီသာ တိုးမြှင့်တည်ဆောက်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး 2နာရီခွဲခန့်ပုံမှန်အလယ်အလတ်သာပြင်းထန်မှုရှိသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါ။
ပထမဆုံးအပတ်၏ တစ်နေ့လျှင်ဆယ်မိနစ်(သို့)ထို့ထက်ပို၍ လှုပ်ရှားမှုပြုခြင်းသည် လုံလောက်ကာအဆင်ပြေလှပါသည်။
ညတိုင်းအချိန်မှန် အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အိပ်ရေးဝပါစေ။ မိမိအိပ်မည့်အခန်းအား စူးစူးဝါးဝါး အလင်းရောင်မရှိပဲ တိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့် ညတွင် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ကာ အာရုံပြန့်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အဆီနည်းပြီး အမျှင်ဓါတ်များပြားသည့် အစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသောက်ကာ သင့်တင့်မျှတသည့် စားသောက်မှုပုံစံများကိုသာကျင့်သုံးပါ။
ကဖင်းဓါတ်ပါဝင်သော သောက်စရာများနှင့် အစားအသောက်များ ဥပမာ ချောကလက်၊ကော်ဖီများသည် စိုးရိမ်မှုကို တိုးပွားစေနိုင်၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စိတ်အားအပန်းပြေစေနိုင်သောလေ့ကျင့်မှုများကို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ပါ။ အချို့သော အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ကြွက်သားဖြေလျှော့မှုများသည် စိုးရိမ်မှုအား လျော့ကျရန် ကူညီသည်။
မိမိ၏အတွေး အခေါ်များကို ပြောင်းလဲပါ။ အကောင်းဘက်မှ အပြုသဘောဆောင်၍တွေးခြင်းသည် မိမိ၏ခံစားမှုများကို ပြောင်းလဲစေတတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျော့ကျစေသည်။
Social Anxiety Disorder – Topic Overview. http://www.webmd.com/anxiety-panic/tc/social-anxiety-disorder-topic-overview#1. Accessed July 5, 2017.
(Learn about Social anxiety disorder. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)